Isikhokelo esivela kuSemalt - Ungayinceda njani iWebhusayithi Yakho Ekuhlaseleni iHacking
Kukho uninzi lwe-cybercrime oluqhubekayo kwiwebhu. Ngenxa yoko, abantu kufuneka bahlaleuyazi ngabo bantu. Ukuba umntu one-website, ukhuseleko lwe-e-trade venture kunye neentengiso zabaxhasi bakho bakhoizandla. AbaHackers bakha isiseko sokuhlaselwa kobuqhetseba, amaphepha okuphanga kunye neentlobo ezahlukeneyo ze-malware ezifana nokusebenzisa i-Trojans ekhona nge-imeyilinxu lumene.
Ngokuqhelekileyo, abahlaseli bajolise kwiwebhusayithi ngezizathu ezininzi. Bokuba bevela kumncintiswanoicala, ufuna ukuzisa indawo yakho phantsi. Kwamanye amaxesha, abahlaseli bangaba ngabantu abafuna ulwazi oluthile olufana ne-imeyile yeephasiwediokanye nolwazi lwekhadi lesikweletu. Kukho iintlobo ezininzi zeentlobo, ezininzi zazo zijikeleze ukwenza ukuba ixhoba lihlupheke.
uJack Miller, ingcali ekhokelayo iSemalt ,ixoxa ngezinye iingcebiso ezingakugcina kude nalaba bahlaseli:
1. Sebenzisa iiphasiwedi ezikhuselekileyo.
Njengomlawuli wewebhusayithi, iphasiwedi yakho inendima enkulu yokulawula ekwenzeniqi niseka ukuba indawo yonke ikhuselekile. Iiphasiwedi ezilula ezinjenge-12345 azikhuselekile kwaye zingawa zixhoba zetyala kunye nephutha ekuhlaseleni. KwezinyeIziganeko, akufanele usebenzise iiphasiwedi ezicacileyo. Iphasiwedi njengosuku lokuzalwa okanye igama lebhokhwe alikhuseli ngokwaneleyo. Ku faneleisakhiwo segama eliyinkimbinkimbi, ukudibanisa iintlobo ezahlukeneyo zobuntu ngezindlela ezahlukeneyo..Kufuneka uqinisekise kwakhona ukuba nayiphi na imibutho esebenzisaiiwebhusayithi zikhusele iiphasiwedi kwakhona.
2. Sebenzisa i-HTTPS.
Ukusebenzisa ukhuseleko lokubeka ukhuseleko kunokuthetha okulungileyo kwiwebhusayithi yakho. Njengokuba,iiwebhsayithi ezinesigqeba sokubamba iHTTPS zinenzuzo kulabo abangenayo. Ngenxa yoko, ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunyeoko bakho abathengi kuxhomekeke kakhulu kwisicwangciso sakho sokusingatha. Ukongezelela, abantu abafumana inzuzo ekusebenziseni le ngcamango bagcina bekhuselekileiiwebhsayithi abaninzi abahlaseli abanako ukungena.
3. Qwayelana nezikripthi.
Ukukhwabanisa kukuba yingxenye yemihla yethu yemihla. Uninzi lwabantu abachitha ixeshaInani elibalulekileyo lexesha elithile kwi-intanethi lijongene nemizamo emininzi ye-Hack. Iimeko ziba zibi nakakhulu kubantu abaqhuba intanethi ezahlukeneyoiinkqubo ezifana ne-admins kwiwebhusayithi ye-e-commerce. Hackers ingaphazamisa iwebhusayithi kwaye ihlawule ezinye zezinto zayo ezibalulekileyo ezifana nemisebenzi.Iinjongo zakho zoPhando lweeNjini zoKhenketho (SEO) zikwazi ukukhawuleza zibe yinto ngenxa yezinto ezilula, eziphumelelayo. Ngenxa yoko, ukhuseleko lwakhokwiwebhusayithi kunye nezokhuseleko lwabathengi bakho zisezandleni zakho njengolawulo lolo sayithi. Ungasebenzisa izicwangciso kwezi zikhokelo ukuba wenzelakho lewebhu elikhuselekileyo, ubungqina bombhoxo ngokuchasayo.